Bangi iyo xisaab bangi | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Dhaqaale, lacag iyo xisaabaadka / Bangi iyo xisaab bangi
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 22 3 2019
Bangi waa shirkad badanaaba ka shaqaysa saddex wax: lacag bixinaha, kaydinta iyo amaahda lacagta. Haddii aad ka yartahay 18 sano ma amaahan kartid lacag, laakiin waad kaydsan kartaa oo lacag bixin kartaa labadaba haddii dadka mas'uulka kaa ahi oggolyiiin arintan. Si loo kaydiyo lacag loona bixiyo lacag waxay bangiyadu leeyihiin adeegyo kala duwan, sida tusaale ahaan xisaab bangi, bangiga intarnatka, kaar bangi iyo bangiga telafoonka.
Waa inaad haysataa xisaab bangi si aad u dabarto dhaqaalahaaga gaarka kuu ah. Xisaabta aad u baahantahay waxay lahaan kartaa magacyo kala duwan tusaale ahaan xisaab mushahaaro, xisaab xawilaad, xisaab shakhsiyan ah, xisaab gaar ah ama xisaabta lacag bixinta. Wax macno ah ma laha magaca xisaabta. Ta muhiimka ahi waa inaad heshaa adeegydan soo socda:
Lacag soo gelida, sida mushahaaro iyo kaalmo
Lacag bixinta dhanka xawilaada, lacag bixinta brevgiro iyo autogiro
La bixida lacag naqad ah
Sida aad xisaab bangi u furanayso markaad hesho sharciga deganaansho.
Adigaaga helay sharciga deganaansho waa inaad samaysaa diiwan-gelinta dadweynaha sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah. Markaasi waxaad helaysaa tobanka lambar ee aqoonsiga ee Iswiidhan. Marka tani dhamaato ayaad codsan kartaa kaarka aqoonsiga Iswiidhan. Marka aad hesho kaarkaaga aqoonsiga ee Iswiidhan ayaad furan kartaa xisaab bangi.
Ka hor intaanad macmiil ka noqon bangi oo helin adeegyada bangiga waxaa bangigu u baahanyahay inuu hubiyo aqoonsigaaga. Bangigu waxaa kale oo uu u baahanyahay inuu ogaad halka lacagtaadu ka imanayso iyo sida aad u isticmaali doonto adeegyada bangiga. Sidaas darteed waxay ku weydiin doonaan su'aalo ka hor intaanad helin adeegyada bangiga.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan bangiga, kaarka bangiga, bangiga intarnatka, BankID iyo Swish.
Akhri dheeraad ku saabsan diiwaan-gelinta dadweynaha iyo tobanka lambar ee aqoonsiga ah.